China Kraft Pepa Simuka homwe fekitori uye vagadziri | Hong Bang
Flat Pazasi Bhegi
chifukidzo kavha bhegi
Pepa kurongedza bhegi
White Pepa bhegi reFlat pasi homwe
Kraft bepa bhegi rekofi uye Tea kurongedza
Tsika Yakadhindwa Plastic Firimu Rolls Kudhinda kweAuto ...
Tsika Yakadhindwa Plastiki Poly Firimu Roll
Kraft Pepa Flat pasi bhegi
Flat Pazasi & Simuka Bhegi
Kraft Pepa Simuka Homwe
Kraft bepa simuka homwe
bepa simuka homwe inzira inonyanyo kuzivikanwa yekupaka yemusika nekuti fomu iyi yekupakata inochinjika uye inoshanda pamwe nekuyevedza. Seizvo zita pacharo rinoratidza, aya mabhegi anokwanisa kumira munzvimbo dzese dzakaomarara. Iyo ine yakakura shefu yekuratidzira kugona uye ivo vanogona kudzora ekuchengetedza zvinodiwa uye nekuwedzera shefu nzvimbo. Kazhinji, iyo simuka homwe inonyanya kushandiswa pane chinwiwa, condiment, zvishongo, tii kana kofi kurongedza. Zvivakwa zveiyo simuka homwe
homwe yekumira inogadzirwa kubva pamatanho akati wandei ezvipingamupinyi zvinhu zvinogona kuiswa mumapoka matatu makuru, anouya pamwechete kupa homwe yacho hunhu uye hunogadzikana husingagone. Aya mapoka matatu ndeaya:
rukoko rwekunze: runobvumira kudhinda graphic kuti kuitwe, kutakura kushambadza iyo inotaurisa meseji meseji uye inofadza kune vatengi.
yepakati layer: inoshanda sedziviriro yekudzivirira kuti ive nechokwadi chekuti izvo zviri muhomwe zvinochengetedzwa zvakachengeteka uye zvitsva.
hwindo remukati: rakakosha kupfuura ese pakati pevatatu. Iyi dura inowanzo kuve fda inogamuchirwa kuona kuti chikafu chakachengeteka kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge Izvo zvakare kupisa-kunovharika kuvimbisa vatengi kuti homwe haina kukanganiswa nayo.
iyo simuka homwe zvakare inobvumidza zvigadziriso maficha senge zipi, maburi epamusoro, kubvarura notches uye spouts kusimudzira kwayo kuita kuchengetedzeka uye mhando yepamusoro ichave yedu yekutanga musimboti. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nechikafu chegiredhi zvinhu zvinoreva kuti iyo firimu yatinoshandisa, inki uye mutsara wekugadzira ndeye 100% chengetedzo kune wese mukuru kunyange mwana. Kupfuurirazve, isu tiri vakasimba nehunhu zvinoreva zero zero shiviriro yechero nzira yekukanganisa inoratidza pane yakasimba kuvaka, kumesa mweya uye kudhinda kwakajeka. Kavha isina kusimba uye yakakwana mechi nevatengi kudiwa ichagara iri yedu chinangwa.
chinoratidza simuka homwe
hwema chiratidzo chemwenje chiratidzo
inodonhedza humbowo hwindo inovhenekera panze inoshamwaridzika vivi dhizaini inoshandiswazve shanduka zvinhu
kurema kurema uye kutakurika hapana yekuyera mutambo uri nyore kusimuka
bpa, lead, pvc, phthalate-yemahara dhizaini uye yakagadzirirwa
heino hongbang kurongedza. Isu tinopa akasiyana mapakeji echikafu mhinduro kune zvakasiyana zvinodiwa uye zvinoshandiswa. Kugadzira kwedu kunogamuchira chero mhando yetsika chigadzirwa. Tinogona kuita kuti chigadzirwa chako chitarisike zvakasiyana senge matte pamusoro, gloss pamusoro kana kuvaratidza pamwe chete pane iko kurongedza. Tiudze chako chinodiwa tichasangana nemarudzi ese ezvido. Isu hatigadzirire zvigadzirwa uye toedza kukuchaira uchienda kwavari; isu tinoteerera kune zvaunoda uye mainjiniya matsva ayo anozogadzirisa ako ekupaka matambudziko.
masevhisi uye garandi isu tine timu yehunyanzvi yebasa revatengi kupindura nekugadzirisa mubvunzo mukati maawa makumi maviri nemana. Nyaya yega yega ichave neyakatarwa munhu kuona dhizaini, huwandu, mhando uye zuva rekutumirwa zvinoenderana nezvinodiwa. Tinoda kupa yakanakisa sevhisi uye kupa zvakanyanya kutsigira kumutengi wedu.
Pashure: Inokurumidza Yega Bhegi bhegi reFlat pasi homwe - Hong Bang
Zvadaro: Chikafu chechipfuwo
Tsika Simuka Homwe
Flexiable Simuka Homwe
Plastic Simuka Homwe
Chikafu Chinovhara Seal Roll 10 ″ X 50'- 2 ...
Tsika Yakadhindwa Plastic Firimu Rolls Kudhinda ye ...
Kero: Kamuri 607, kuvaka C, xiangzhigu, 58 NANLIAN Road, Longgang District, Shenzhen Guta, Guangdong Province
Runhare: 0755 2898 8518
Iyo yekuvandudza tarisiro ye kraft bepa bhegi
Indonesia International Kurongedza Exhibition
Hong Kong Yepasi Pese Kudhinda uye Rongedza ...
© Copyright - 2021-2023: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.